Kenya oo haweenka qaba HIV/AIDS ka joojisay isticmaalka dawada dolutegravir - BBC News Somali
Kenya oo haweenka qaba HIV/AIDS ka joojisay isticmaalka dawada dolutegravir
Wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya ayaa hakisay isticmaalka dawooyin cusub oo lagu dabiibo dadka qaba cudurka HIV, gaar ahaanna in la siiyo dumarka kaddib markii ay soo baxday daraasad laga sameeyay dalka Botswana oo lagu ogaaday in dawooyinkaasi ay dhibaato dhanka maskaxda ah u keenaan dhallaanka ku jira uurka hooyadood.
Shirkadaha Mareykanka iyo reer Yurub ayaa bishii May ee sanadkan walaac ka muujiyay dawooyinka dolutegravir (DTG).
Dawada DTG waxaa sameysa shirkad Britain laga leeyahay oo lagu magacaabo GlaxoSmithKline.
Shirkaddaasi ayaa sheegtay in ay mas;uuliyiinta caafiamadka kala shaqeyn doonto sidii loo darsi lahaa dhibaatooyinka dhanka caafimaadka ah ee ka dhalanaya dawadaasi.
Natijooyinka horudhaca ah ee daraasada laga samaayay dumarka qaba cudurka HIV/Aids ee waddanka Botswana ayaa muujisay in ku dhawaad 1% carruurta ay dhalaan haweenka isticmaalay dawada dolutegravir xiliga ay xaamilka yihiin ama waxyar uun kaddib ay carruurtaasi ku dhashaan naafonimo xaga maskaxda ah.
Iyada oo lagu saleynayo natiijooyinkaasi, ayaa dalalka horey ugu qoray dawooyinkan inay adeegsadan haweenku, waxa ay ku siiyeen tallo shaqaalaha caafimaadka in aanay dawooyinkan qaadanin dumarka dhalaya.
Dumarki horey u isticmaalay dolutegravir ayaa tallo lagu siiyay inay isticmaalaan dawooyinka looga hortago uurka ama ay kala tashadaan shaqaalaha caafimaadka wixii kale oo ay sameyn karaan hadii ay doonayaan inay uur qaadaan. Tallada lagu saleeyay cilmibaarista ayaa wali socoto.
Waxa ayna ka dhigan tahay taasi mid aan xaqiiq ahayn balse masuuliyiinta ayaa qaadaya tallaaboyiin taxadar leh.
Shirkada soo saarta dawooyinkan ayaa sheegeysa inaysan jirin xiriir la ogyhay oo ka dhexeeya daawadan dolutegravir carruurta dhalata, aysanna waxa cadeyn ah u helin daraasadahoodii ay horey u sameeyeen.
Tallaabadan ayaanan saameynin raga isticmaala dawadan HIV/Aids.